भिटाली Kaleshin: को क्रास्नोडार मा फुटबल
Kaleshin भिटाली - क्रास्नोडार एक देशी र स्थानीय फुटबल स्कूल को एक स्नातक। मान्छे यो पेशामा छान्नुभएको कुनै आश्चर्य किनभने आफ्ना पिता - कुनै पनि धेरै लगातार मौसम लागि "KUBAN" को वर्दी लगाएका गर्ने प्रसिद्ध अन्तिम मिडफिल्डर, भन्दा अन्य। एल्डरले भाइ Vitali, यूजीन Kaleshin पनि आफ्नो बुबाको पाइला पछ्याए। उहाँले धेरै रूसी क्लब को रंग बचाव र हाल कोच, "KUBAN" को रूपमा काम गरिरहेको छ।
भिटाली Kaleshin - फुटबल, debut को polulyubitelsky "KOLOS" मा भयो जो। मान्छे चाँडै सत्र वर्ष मा नै ठोकुवा सबै नै "KUBAN" ", वृद्धि गयो।" त्यहाँ उहाँले मुख्यतः क्रास्नोडार क्षेत्र को च्याम्पियनशिप मा आरक्षित टोली लागि प्ले। Vitaliy रूस फुटबल टोली को एक मा प्राप्त गर्न राम्रो मौका थियो, तर युवा रक्षक को Moldovan "रोम" को निमन्त्रणा स्वीकार गरे। आधारित क्लब थियो Balti, मा, भिटाली Kaleshin, दुई पूर्ण मौसम प्ले त्यसपछि Togliatti देखि "LADA" एउटा सम्झौता हस्ताक्षर फिर्ता रूस गए।
Togliatti जहाँ Kaleshin रक्षक आधारभूत संरचना को undisputed खेलाडी थियो पहिलो टोली बन्यो। तर त्यसपछि उहाँले पनि 126 मिलान मा "LADA" मा उन्नाइस लक्ष्य स्कोरिङ उहाँलाई रोकियो छैन कि मिडफिल्डर मा बोल्नुभयो। खैर, यो पहिलो फुटबल लिग मा अञ्चल प्रतियोगिताको बाहिर चढ्नु सक्षम थियो क्लब Kaleshin टीम को प्रस्तुति समयमा थियो। कुनै आश्चर्य यो महान आकार वृद्धि मा जानुहोस् र आफ्नो गृहनगर फर्कन प्रस्ताव छ, जबकि युवा खेलाडीहरू धेरै छिटो छन्। निस्सन्देह, उहाँले इन्कार गर्न सकेन।
23 वर्ष को उमेर मा उनले क्लब दीर्घकालीन सम्झौता संग हस्ताक्षर, भिटाली Kaleshin KUBAN गर्न recruited थियो। को "पहेंलो-हरियो" फुटबल को प्रदर्शन समयमा बिस्तारै "कम" आफ्नो लक्ष्य नजिक रही र बिस्तारै एक पूर्ण-फिर्ता बदल्यो, र उहाँले दुवै Flanks मा प्ले गर्न सकिएन। राम्रो गति संग, त्यो आक्रमणमा नियमित सामेल, सबै curb बन्द। को "KUBAN"5मौसम मा आयोजित र दुई पटक फुटबल खेलाडी को प्रिमियर लिग मा उनको आरोहण मदत गरे। तथापि, अधिक एक वर्ष क्रास्नोडार टीम कुलीन विभाजन रहन काम गरेन। खैर, आफ्नो नेतृत्वको र Tolyatti, क्रास्नोडार र भिटाली धन्यवाद टोलीमा कप्तान भयो।
यसको शिखर मा
को "KUBAN" एफसी "मास्को" मा एक सय र पचास प्रदर्शनमा लागि भएको प्ले (थियो राजधानी क्लब खेलाडीहरू तथापि, प्रतिद्वन्द्वीको गरेको गेट मा डबल-हस्ताक्षर 18 मिलान, को कुल), भिटाली Kaleshin एक वर्ष प्रिमियर लिग अर्को relegation पछि, उहाँले आ एउटा प्रस्ताव स्वीकार leaps र कजान "Rubin" को सीमा गरेर अगाडि।
आज्ञाकारी र कांस्य कप र सुन, र राष्ट्रीय कप, सुपर कप र दुई देशहरू त्यहाँ फुटबल खेलाडी। क्याटालान "बार्सिलोना" - कजान को प्रदर्शन को चरमोत्कर्षलाई "शिविर खेल्नुहोस", Kaleshin र कम्पनी संसारमा सायद, पराजित जहाँ, बलियो क्लब मा दिग्गज मिलान थियो। त्यसपछि कजान टोली खेलाडीहरू आफ्नो प्रशंसक गर्व हुन एक वास्तविक अनुभूति र केही प्रस्तुत र Kaleshin खेल 90 मिनेटमा प्ले। "Rubin" रक्षक कुल 50 भन्दा बढी मिलान प्ले, र यो पेसा खण्ड सबैभन्दा आफ्नो फुटबल क्यारियर मा सफल मान्न सकिन्छ छ। Kaleshin दुई पल्ट क्रास्नोडार क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी मत दिनुभयो। कजान मा सधैं गर्ने Vitali Kaleshin सम्झना हुनेछ। फोटो खेलाडी क्लब संग्रहालय मा राखिएको छ।
"रूबी" Kaleshin संग सम्झौता को समाप्ति को को समय पहिले नै 33 वर्ष थियो। फुटबल स्तर यस अनुभवी उमेर, झन् गाह्रो त उच्चतम स्तर मा खेल्न भएका थिए। तैपनि, आफ्नो पैतृक क्रास्नोडार रक्षक खुला हतियार भेटे, र 2013 मा, भिटाली Kaleshin दोस्रो फिर्ता समय आफ्नो गृहनगर मा खेल्न। अब एफसी "क्रास्नोडार" मा। यसको venerable उमेर भए तापनि यसलाई क्लब मा मुख्य रक्षक छ र शायद पनि उच्चतम स्तर मा एक 1-2 सिजन पकड।
एरिक Abidal - एक लड आत्मा संग फुटबल खेलाडी
फुटबल क्लब "स्पेनीस": इतिहास
फुटबल खेलाडी दिमित्री Sennikov: जीवनी
फुटबल काजाकिस्तान: सुविधा र सफलताको
ढाँचा घडी: सहज र सुन्दर सहायक सी!
मृत द्वीप Povegliya
के राम्रो Timberland जूता (महिलाहरु)?
आधुनिक शिक्षा र विज्ञान को समस्या। राज्य स्तरमा समस्या समाधान
आलु पकौडी - नुस्खा, विशेष गरी पकाउने, दृश्य र समीक्षा
कति गाँजा को मूत्र र रगतमा राखिएको छ?
चित्रहरु लागि आफ्नै हातमा एउटा एल्बम बनाउन - वर्ष आउन लागि स्मृति सुरक्षित